Ntutu | Ọkọwa Okwu Ahụike
Nleghachi anya nke ụlọ 2 maka agba ntutu dị mma
Medlọ obibi maka agba agba maka ahụike agba. Nke a bụ Otu n'ime Nlekọta Homelọ Dị Mma Maka ntutu dị mma.
Weghachiri isi awọ na agba okike!
Ọ bụrụ na ị jụọ onye ji ọgwụ a, ha ga-agwa gị na ọ ga - eme ka ahụhụ ụzọ gị na ọmarịcha ahụ gị na-ahụ ya, mana mmetụta kachasị dị ịtụnanya bụ na ọ nwere ike weghachite ntutu na-acha ọcha ma mee ka ntutu gị toro oke. karịa tupu.
Ntutu, ntutu na ntu - ọgwụgwọ na ọgwụ
Ntutu, aji na ntu.
Mmanya bụ akwa dị nro. Naanị gbanye ụfọdụ n’ime nnukwu mmiri dị ọcha wee sachaa. Ntutu isi gị akọbeghị isi!
ShopFreeMart Vitalize nwere nri dị mkpa maka ntutu dị mma, anụ ahụ na mbọ. Ọ nwere ike inye aka mee ka ntutu gị too uto ma na -ebe ntu ma belata mmịkpọ na ntigasị nke anụ ahụ gị. Kemgbe na-ewere ShopFreeMart Vitalize, ntutu m na mbọ m ahụbeghị ahụ ike ma ọ bụ gbasie ike karị.